INDLU YEGADI 1: Ubuhle, uYilo kunye neNdalo - I-Airbnb
INDLU YEGADI 1: Ubuhle, uYilo kunye neNdalo
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguDamian
Ukuba ukutyelelo lwexeshana elifutshane, iholide yosapho, okanye kuhambo lweshishini, wamkelekile kwindlu yam yegadi yanamhlanje nenomtsalane, indawo ekhethekileyo yokuhlala eTimisoara. Ujikelezwe ziigadi eziluhlaza, apha uya kufumana ukonwabela kwikhaya langoku, ngokuchukumisa okuthambileyo kwendalo kunye noyilo lwangaphakathi olusemgangathweni. I-Garden House nayo ilungile enye indawo yokusebenza-usuka-ekhaya, okanye kwimisebenzi yosapho. Sithatha amanyathelo amakhulu ococeko, ukungena komoya ngokufanelekileyo, ukucoca kunye nokubulala iintsholongwane emva kondwendwe ngalunye.
Ifakwe kwigadi enkulu, apha uya kuhlala ufumana ubumfihlo bakho kunye nendawo yakho ekhethekileyo ukonwabela ixesha lakho, ujikelezwe yimithi emidala kunye neentyatyambo. Ungayonwabela ikofu yakho yasekuseni okanye isiselo esitsha, ungcamle iziqhamo kunye nemifuno kwaye kuselula kwaye kuyakhawuleza ukufikelela kumbindi wesixeko.
IGarden House inekhitshi langoku apho uya kufumana yonke into oyifunayo ukupheka nokulungisa ikofu. Igumbi lokuhlambela, elincinci kwaye langoku lixhotyiswe ngeshawa enkulu, isinki kunye nendlu yangasese. Igumbi lokulala libanzi linefestile enkulu ejonge egadini. Inomabonakude wescreen esicaba, iwodrophu enkulu, kunye neebhedi ezi-3 ezenziwe ngoomandlalo aba-3 abakumgangatho ophezulu: i-queen matrasi e-1 kunye noomatrasi aba-2 abangabodwa, ukuze abantu aba-4 balale kamnandi. Kwizicelo ezikhethekileyo, singongeza i-mattress eyongezelelweyo kumntu we-5.
Sinebhedi yomntwana ekhethekileyo elungiselelwe iintsapho ezincinci.
4.97 · Izimvo eziyi-232
IGarden House ikwindawo yakudala, enye yeekota zembali zaseTimisoara. Uninzi lwezinto ezinomtsalane zifikeleleka ngeenyawo ngaphantsi kwemizuzu engama-30 ukusuka endlwini. Kwimizuzu eyi-10 yokuhamba umgama unokutyelela i-PIATA TRAIAN endala kwaye ngomzuzu we-1 ngaphezulu uya kufikelela kwi-PIATA ROMANILOR ngeyona cawa inomdla kakhulu kwisixeko. Kukho iivenkile kunye nevenkile enkulu ekufutshane nendlu yethu.
Ukufika kwisikwere esidala sePIATA UNIRII, udinga malunga nemizuzu eli-10 ngemoto, imizuzu eli-9 ngetram, okanye unokuba nokhenketho oluhle lokuhamba olumalunga nemizuzu engama-25 ukuya kwengama-30 kwizitrato ezinomdla nezindala zesixeko.
Umbuki zindwendwe ngu- Damian
Sinikezela ngeemephu zesiXeko kwiindwendwe zethu kwaye ndingacebisa ezona ndawo zintle kwaye zipholile eTimisoara: iindawo zokutyela, iivenkile zekofu, iibhari, iimyuziyam, iminyhadala, into oyibonayo kunye nendlela yokuya kwiindawo eziphambili.
Sinikezela ngeemephu zesiXeko kwiindwendwe zethu kwaye ndingacebisa ezona ndawo zintle kwaye zipholile eTimisoara: iindawo zokutyela, iivenkile zekofu, iibhari, iimyuziyam, iminyha…